भारतीय नागरिकले प्रहरीलाई आ’क्रम’ण गरेपछि यसरी सुरक्षामा उत्रियो मधेसी समुदाय (भिडियो हेर्नुस्) – Nepal Insider
छोरि मरी भनेर घरकाले सेतो कपडामा बेरेर नजिकैको जङ्गलमा लगेर गा’ड्न ठिक्क पारेका बेला चलमलाएपछि बाँचेकी थिईन नन्दा (भिडियो)
बधाई : ३ वर्षको प्रेमपछि विवाह गर्दै रमेश प्रसाई , यी हुन् बेहुली
बिजोरमा ट्राफिक नीति : बिहान केही मोटरसाइकल समात्ने, दिनभर छाड्दिने !
बन्द भएको ८ महिनापछि खुल्दै नेपाल–भारत हवाइ उडान, २ देशका नागरिक मात्रै यात्रा गर्न पाउने
मुख्य पृष्ठ /भिडियो/भारतीय नागरिकले प्रहरीलाई आ’क्रम’ण गरेपछि यसरी सुरक्षामा उत्रियो मधेसी समुदाय (भिडियो हेर्नुस्)
भारतीय नागरिकले प्रहरीलाई आ’क्रम’ण गरेपछि यसरी सुरक्षामा उत्रियो मधेसी समुदाय (भिडियो हेर्नुस्)
काठमाडौं । कोरोना फैलन नदिन नेपाल भारत सिमानामा अहिले रोक लगाइएको छ । कोरोना फैलन नदिन मुलुकमा लगाइएको लकडाउन अन्त्य गरेपछि भारत र अन्य मुलुकसंगको सिमाना भने खोलीएको छैन । अहिले अन्य मुलुकवाट नेपाल प्रवेश गर्न पाइदैन । भारतसंग नेपालको खुला सिमाना छ । लकडाउन अघि नेपाल भारत सिमाना हुँदै सबै गतिविधि खुला रुपमा हुँदै आएको थियो ।
आवत जावन, व्यापार ब्यवसाय हुँदै आएको थियो । तर सिमा बन्द भएका कारण अहिले सबै काम ठप्प छन् । सिमा बन्द भएका कारण त स्क रहरुको पेसा पनि प्रभाव परेको छ । सिमानामा विभिन्न किसिमका सामान त स् कर गर्दै आएका कारण सिमा बन्द भएका कारण काम ठप्प भएको छ । सिमानामा प्रहरी तैनाथ छन् । आवत जावत गर्न दिइएको छैन । त्यसैले त स्क रका काम पनि प्रभावित भएको छ । सिमानामा सुरक्षा बढाइएका कारण आफुहरुको काम ठप्प भएपछि त स्क रको निशानामा सुरक्षाकर्मी पर्ने गरेका छन् ।
हिजो शुक्रबार रौतहटको परोहा नगरपालिका-८ नरकटिया गूठीमा भारतीय नागरिकले नेपाल सशस्त्र प्रहरीमाथी धा रि लो ह ति या रले आ क्र म ण गरे । नेपालमा अनावश्यक रुपमा प्रवेश गर्न लागेका भारतिय नागरिकलाई प्रहरीले रोकेपछि प्रहरीलाई नै आ क्र म ण गरेका थिए । नेपाली प्रहरीलाई भारतीय नागरिकले आ क्र म ण गरेपछि सिमानामा रहेका नेपालीहरु प्रहरीको सुरक्षामा गयो । सो क्षेत्रमा मधेसी समुदायको बसोबास छ ।
प्रहरी माथि भएको आ क्र म णको खबर पाएपछि मधेसी समुदायका युवाहरु ला ठी लिएर भारतीय नागरिकलाई ध’पा’उन गएका थिए । स्थानियले प्रहरीको सुरक्षा गरे । सो घटनाको भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ । प्रहरीको सुरक्षामा मधेसी समुदायका युवाको ठूलो समुह गएको भिडियोमा देख्न सकिन्छ ।
बिरामी बहिनिलाई घरबेटीले गर्यो यस्तो घिनलाग्दो काम ! अब मानवता हराएकै हो त ? (हेर्नुस् भिडियो)
सुशान्त राजपुत सपनामा आएर भने, ‘राखी म तिम्रो गर्भवाट फेरी जन्म लिँदैछु मेरो फ्यानलाई भनिदिनु’ (भिडियो हेर्नुस्)